Mihena ankehitriny ny tsindrona vaksiny COVID: Mety hampidi-doza ny fanaovana vaksiny
Home » Lahatsoratra farany farany » Tsindrio eto raha ity ny fanambaranao an-gazety! » Mihena ankehitriny ny tsindrona vaksiny COVID: Mety hampidi-doza ny fanaovana vaksiny
Tombanana fa misy ny hantsana famatsiana tsena manerantany amin'ny 1.2 lavitrisa autodisable (AD) syringe azo antoka-tsindrona fitaovana ho an'ny fanaterana vaksiny COVID-19. Ity hantsana famatsiana ity dia mety ho lasa sakana izay mety hanohintohina ny fandefasana vaksiny ara-potoana any amin'ny antsasaky ny firenena eto an-tany.
Tamin'ny 11 Novambra, ny PATH sy ny United Nations Children's Fund (UNICEF) dia nanao Fivoriambe Global COVID-19 Vaccine Syringe Industry Convening izay nampivondrona roapolo mahery amin'ireo mpanamboatra syringe lehibe indrindra eran'izao tontolo izao sy fikambanana maro samihafa mba hanamora ny fangaraharana mitombo manodidina ny tsenan'ny syringe AD mba hanampiana. Manamafy ny famatsiana vaksiny COVID-19 ary koa ny fanaovana vaksiny mahazatra. Ny mpanamboatra dia nanamafy ny fanamby famatsiana AD syringe eran-tany nanomboka ny faran'ny taona 2021 ka hatramin'ny tapaky ny taona 2022, na dia nampitombo avo telo heny aza ny famokarana sy ny ezaka nataon'ireo fikambanana multilateral mba hahazoana syringe AD fanampiny ho an'ny firenena ambany sy antonony izay mila azy ireo.
Ny fisondrotan'ny fangatahana syringe ho an'ny vaksiny COVID-19, tombanana ho 4 lavitrisa mahery manomboka amin'ny faran'ny taona 2021 ka hatramin'ny tapaky ny taona 2022, dia noho ny firongatry ny fatran'ny vaksiny COVID-19 any amin'ireo firenena mandalo COVAX, lehibe. fanomezana avy amin'ny governemanta, ary fifanarahana roa tonta. Miorina amin'ny angon-drakitra famatsiana sy fitakiana eran-tany, ny modeling PATH dia manombatombana ny elanelana maneran-tany amin'ny 1.2 lavitrisa AD syringes.
Ny loza mety hitranga amin'ny famatsiana syringe toy ny famerana ny fanondranana any amin'ny firenena, ny fahatarana ny fandefasana, ny tsipika famokarana vaovao tsy nahazo ny fahazoan-dàlana ho an'ny Fikambanana Iraisam-pirenena Momba ny Fahasalamana (WHO), na ny fahatarana amin'ny famitana ny fanitarana nomanina dia mety hampitombo ny hantsana mitambatra ho 2 miliara mahery mandritra io vanim-potoana io. Ny fatran'ny booster dia mety hiteraka fanerena fitakiana fanampiny amin'ny tsena.
Ny vaksiny dia atao amin'ny alàlan'ny tsindrona AD any amin'ny firenena efa ho 70, ary firenena 30 no mampiasa izany ho an'ny vaksiny sasany. Nanomboka tamin'ny 1999, ny OMS, ny UNICEF, ary ny Tahirim-pon'ny Firenena Mikambana momba ny mponina dia nanoro hevitra ny fampiasana manokana ny AD syringes maneran-tany ho an'ny vaksiny satria izy ireo dia "mampiseho ny risika ambany indrindra amin'ny fifindran'ny otrikaretina entin'ny rà toy ny hepatita B na VIH". satria tsy azo esorina na ampiasaina indray ny fanjaitra AD syringe.
Ny tena zava-dehibe dia manome fatra raikitra avokoa ny syringe AD rehetra, midika izany fa tsy azo fenoina amin'ny fatran'ny vaksiny iray ihany izy ireo. Ny ankamaroan'ny vaksiny, anisan'izany ny vaksiny ilaina amin'ny fahazazana, dia atao amin'ny alàlan'ny fatrany 0.5 mL sy syringe AD mifanandrify. Ny sakana ara-pitaovana mifandraika amin'ny fandefasana syringe AD dia nitombo niaraka tamin'ny fivoaran'ny vaksiny mivoatra, toy ny fisian'ny vaksiny Pfizer vao haingana izay mitaky syringe AD 0.3-mL AD, izay mbola tsy novokarina hatrizay. Ny haben'ny syringe vaovao dia mamily ny tsipika famokarana amin'ny famokarana syringe AD mahazatra ary manampy amin'ny fanamby amin'ny fampifanarahana ny fatran'ny vaksiny amin'ny haben'ny syringe marina amin'ny fotoana hanaovana vaksiny.
Ny rafitra famenoana banga mety hanafaingana ny fidirana, hampihenana ny fahatarana, hanatsarana ny fiarovana ary hananganana famatsiana maharitra dia ahitana:
• Manitatra ny fahaiza-mamokatra amin'ny alalan'ny fampiasam-bola stratejika sy ny fandrisihana hanorina famatsiana maharitra sy hampihenana ny fahataran'ny fandefasana: Ny mpamatsy vola, ny mpampiasa vola ary ny governemanta dia afaka mampiasa ny fitaovana ampiasaina hanentanana ireo mpamatsy vaksiny, anisan'izany ny famatsiam-bola, fampindramam-bola tsy misy zanabola na ambany, ary antoka ho an'ny vola. manonitra ny risika sasany ho an'ny mpamatsy. Tena zava-dehibe indrindra ny fanitarana ny famokarana syringe eto an-toerana any Afrika sy Amerika Latina, izay misy toby famatsiana voafetra ary fotoana fandefasana maharitra ho an'ny famatsiana any ivelany.
• Tombanana indray ny toe-javatra momba ny fampiasana: Mandra-pahavitan'ny tsy fahampian'ny syringe AD, ireo firenena afaka mampiasa karazana syringe fiarovana hafa dia afaka manampy amin'ny fitahirizana ny famatsiana syringe AD ho an'ireo firenena manana rafitra ara-pahasalamana voafetra.
• Manara-penitra ny habetsahan'ny fatran'ny vaksiny: Raha namorona vaksiny COVID-19 vaovao, mpanentana, ary fatra ho an'ny ankizy ny mpanamboatra vaksiny mba hifanaraka amin'ny syringe AD efa misy fatra raikitra, dia hanamora ny hetsika lozisialy, famokarana ary fanaovana vaksiny izany.
• Halaviro ny famerana ny fanondranana firenena izay mametra bebe kokoa ny famatsiana: Ireo firenena manana fahaiza-manao famokarana syringe dia afaka manampy amin'ny famahana ny tsy fahampian'ny famatsiana maneran-tany mba hahatratrarana ny tanjona 70 isan-jato amin'ny fanaovana vaksiny.
Ny PATH dia hanohy hanara-maso ny tsena, miaraka amin'ny fanavaozana andrasana amin'ny angon-drakitra amin'ny 2022 raha misy fiovana lehibe. Ny maodely PATH teo aloha navoaka tamin'ny Desambra 2020 dia nahitana risika lehibe, ao anatin'izany ny tsy fahatokisana ny fangatahana ary koa ny fotoana, ny lozisialy fandefasana ary ny teritery amin'ny fanatobiana entana.